रेखा थापा भन्छिन : म काठमाडौंको मात्रै होइन सिंगो देशको विकास गर्न सक्छु !! – Complete Nepali News Portal
रेखा थापा भन्छिन : म काठमाडौंको मात्रै होइन सिंगो देशको विकास गर्न सक्छु !!
June 15, 2017	824 Views
म काठमाडौंको मात्रै होइन सिंगो देशको विकास गर्न सक्छु। यहाँका सबैखाले समस्या समाधान गरी नागरिकलाई खुसी पार्न सक्छु। नागरिकलाई अनुशासित बनाउने, जनचेतना फैलाउनेलगायत काम उच्च प्राथमिकता दिनेछु। नागरिकबाट
कस्तो अनौठो संस्कार : दुई किशोरीबिच बिहे गरिदिएर पाप पखाल्ने
ऑमॉ को यो पिडादायक घट्ना सुनेर ऑशु थामीएन ! १८ वर्ष हराएकी सरस्वती घर फर्किंदा…(भिडियोसहित)
नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकार सुनिल थापाले उनका छोरालाइ उज्ज्वल भविस्य बनाओस भन्ने उदेश्यले अमेरिकामा पढाए : सत्य कथा